izwi rekuyedza rezwi VOICE rinoda kuongororwa wechipiri O. kumirira mhinduro ...
tarisa izwi rezwi VOICE iwe unofanirwa kutarisa wechipiri O. kumirira mhinduro ... Iri harisi cheki izwi. Mazwi mazhinji anodzidziswa muchimiro chemazwi asinga dudzike muchikoro chepuraimari ari ...
Nzira yekuronga zvakanaka basa rekomiti yevabereki mureshi? Masikati akanaka! Ndokumbirawo uzvizive nechinzvimbo chekomiti yemubereki mukireshi. 1. Mabasa uye zvirimo zvebasa. Dare revabereki rakagadzirwa kuitira ...
ndokumbira unditaurire nhetembo, nziyo pamusoro pemaoko amai amai Modest, kufukidza chanza nechanza choruoko, nerunyararo maoko patafura.Vapererwa nesimba, vachimonyorora minwe yavo mukurwadziwa, Vari kudhonza kahengechefu kadiki.Waimbove uri mudiki, Kuchengeta kutsvoda zvinyoro ... Anodakadza, ane mutsa, Anodiwa Maoko, ...
Tsanangura nzvimbo yekukura chaiko kwemwana, zvinoenderana nedzidziso dzaL. S. Vygotsky Hongu, unovhura Vygotsky woverenga sosi yekutanga, urikudzidza kubva mukunzwa here? Iyo zone yeiyo proximal budiriro iri padanho rekuvandudza rinowanikwa nemwana mu ...
Ndiudze sumo pfupi yengano.Ndanga ndiripo, mudiwa, ndainwa doro. Yayerera nemacheche, asi haina kupinda mumuromo. Munguva pfupi ngano ichazvitaurira yega, asi haizoitwe nekukurumidza. ... Pasina kutaura ...
Maawa ekuvhura kubva panguva ipi uye kusvika nguvai iyo kindergarten inofanira kushanda ??? iyo manejimendi ine chirongwa chebasa. Kazhinji gadheni rakavhurika kubva 8 kusvika 19 kana kubva 7 kusvika 18.
Tsanangura Kana uchiita chero tsvagiridzo, panosarudzwa mapoka maviri. Iko kuyedza kunosanganisira vana vane basa rinoitwa kuti vagadzire chimwe chinhu nedzimwe nzira dzakananga. Mukutonga - vana vane vakadaro ...
Ndibatsireiwo kunyora nyaya diki pamusoro pambuya yemwana ari kukireshi Mhoroi, ini ... ndina ambuya. Anonzi ... ndinomuda zvikuru! Paanosvika anogara achiuya nezvipo ...
Ini ndinonyatsoda ndima nezve mweya! Mhepo yakachena inodikanwa uye inobatsira kuvana! Iko kunakidzwa kwakawanda kwatiri kufamba! Uye hapana hurwere! ... naOksana Krynina Kufema Ini ndinomuka ndichitonhora ziya ndinomuka ndiri ...
Kanda mune zvirevo uye zvirevo nezvemiriwo nemichero yekireshi. Muriwo wega wega une nguva yawo wega.Onion kubva kuzvirwere zvinomwe.Muriwo wega wega une nguva yawo. (Chirevo cheRussia) Zvinotora nguva yakawanda kuti shizha ...
Zvirahwe zvinodikanwa nekukurumidza! Iko kusina chipanje, Kusingageze, kusingaome, ndinotora basa: Zvitsitsinho, magokora nesipo, ndinokwesha mabvi, handikanganwe chero chinhu. (Sponge) Yakavharwa bhendi ...
Ndokumbira unditaurire maitiro ezuva nezuva muchidyiro! Mwana anoendeswa kangani kukireshi uye anofanirwa kuzviitirei iye? Iko kune STANDARD MUDZIMAI PAMUSORO PESESHURE EDUCATIONAL INSTITUTION, uko kwakanyorwa kuti: "Preschool education ...
Mabhuku eboka repakati rekireshi Karl Marx "Capital" Bvunza mudzidzisi mukireshi "Chirongwa chedzidzo uye kudzidziswa". Iko kune runyorwa rwekunyepedzera kwezera rega reboka: nhetembo, ngano, ...
Ndiani anokodzera kindergarten mabhenefiti? Vana vakaremara (vana vakaremara vane chitupa chakakodzera) vanopinda kindergartens mahara, 50% inobhadharwa kuchengetedza vana vanobva kumhuri huru ...
Uye zvakare kamura kuita syllables: gnome, nyoka, gnome perch, nyoka-ya, o-kun. gnome imwe syllable nyoka-i -two o-kun ma syllables maviri kuti mavhawero mangani aripo mushoko uye mangani mashiripiti ane mavhawero akawanda mushoko ...
ndiani anoziva kuti chii honye Kubva pamazera emwedzi 6 - 7, mwana anotanga kushingairira kudzidza nezve nyika inomukomberedza kwete chete nenhengo dzekuona, senge chiono, kunzwa, kunhuwidza, kuravira kwekunzwa, asiwo ...
Nzira yekunyora nenzira kwayo mutemo pamakwikwi evana ekugadzira? Yakagamuchirwa na: Musoro weMBDOU __________ Zita rizere ZVIMWARI nezve makwikwi emabasa ekugadzira semuenzaniso ngowani yepakutanga General zviyero Kukwikwidzana kwemabasa ekugadzira Iyo ngowani yepakutanga ...
Chii chinotariswa naRospotrebnadzor mu kindergartens? Unofanirwa kunge wakavhiringidza chimwe chinhu, uku hakusi kutarisira kwevatengi kweRussia, asi kutarisa kweRussia dzidzo. Kuteerera neSanPin. Kuchengeta ese majenali, mabhuku ezvokurapa, makirasi, chirongwa ...
Nhetembo dzakanaka pamusoro pemurapi wekutaura. Inokurumidza kudiwa !!! Goverana. unogamuchirwa !!! Kushivirira uye kugona, Kutsungirira uye kukunda - Aya ndiwo matanho akakosha mune basa remurapi wekutaura. All Nadis, Vani, Viti Vanofanira kutaura, ...
Sanminimum yemudzidzisi we kindergarten. Mutemo wekukanganisa. ) Heino itsva SanPiN 2013 Kugadziriswa kweMukuru weHurumende Chiremba Chiremba weRussian Federation yomusi waMay 15, 2013 N 26, Moscow kubva ku "On mvumo ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,648 masekondi.